Tapfiliate: Yakachipa Affiliate Kushambadzira Management | Martech Zone
Tapfiliate: Yakachipa Affiliate Kushambadzira Management
Chitatu, November 19, 2014 China, July 23, 2015 Douglas Karr
Kuita mari pamusoro pechinyorwa chakaita seMartech kunoda kuyedza zvakanyanya. Isu tinoshandisa nzira dzinoverengeka dzakasiyana, kusanganisira kushambadzira kwakabhadharwa kuburikidza neyedu yekushambadzira, kuburikidza neGoogle Adsense, kuburikidza nekubatana pamwe nekutsigira - uye zvakare kuburikidza nekubatana kwekushambadzira.
Chii chinonzi kushamwaridzana Kushambadzira?
Affiliate kushambadzira rudzi rwekushambadzira-based kushambadzira umo bhizinesi rinopa mubayiro mumwe kana vazhinji vanobatana kune mumwe nemumwe mushanyi kana mutengi anounzwa nemubatanidzwa wekushambadzira kwake.
Inobatana Sei Kushambadzira Kushanda?
Iyo yekare nzira yaive yekupa yakasarudzika yekutengesa kodhi kana dhisikaini kodhi iyo mutengi aifanirwa kupinda mukati mekutarisa-kubuda maitiro kuitira kuti mubatanidzwa ugozozivikanwa mukutengesa kwega kwega. Nekudaro, yepamhepo yakabatana kushambadzira inoshanda nekupa yega yega yakabatana ine yakasarudzika yekutevera kodhi iyo yavanogona kushandisa mune zvinongedzo munzvimbo yavo yese saiti. Muverengi paanodzvanya chinongedzo chakasarudzika, mutengi anoteverwa otomatiki munzira yavo yekutenga kuitira kuti mubatanidzwa uzivikanwe otomatiki.
Inobatanidza kushambadzira inzira yakanaka yekushambadzira zvigadzirwa zvako nekuti iwe unongobhadhara chete pakutendeuka… kwete pamabhatani kana zvinoratidzwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unongobhadhara mumwe munhu kana iwe uchinyatso kuwana kutengesa! Uye iwe haugone kuvabhadhara kusvikira iwe wabhadharwa kutanga saka hapana nyaya yekubuda kwemari, chero.
Kugadzirisa chirongwa chekubatana kunogona kuve kwakaomarara, zvakadaro! Kuchengeta rondedzero yeakaunzi, zvinongedzo, kutengesa, uye kubhadhara kunogona kubuda mukutonga nekukurumidza pasina yakabatana yekushambadzira manejimendi sisitimu. Tapfiliate iri inokwanisika yakabatana yekushambadzira manejimendi system. Uye fungidzira chii? Icho chinongedzo chekubatana kubva kune yavo yega yakabatana system.
Tapfiliate Key Zvimiro
Sanganisa Tapfiliate uchishandisa imwe yemamojuru avo, magwara kana kungoisa manyore.
Setup yako yakabatana chirongwa uye komisheni chimiro.
Wedzera zvikwangwani uye zvinyorwa zvemavara zveavo vanobatana kuti vashandise.
Goverana yako purogiramu yekukoka url kuti uwedzere vanobatana kuchirongwa chako.
Manage uye ongorora maonero, kudzvanya, kutendeuka, CTR, CVR, geo-kugovera, nezvimwe.
Wona uye ubvumire maprofayili ehukama.
Kunyangwe zvirinani, Tapfiliate yatove nekubatanidzwa kwakawanda, kusanganisira Magento, Prestashop, Shopify, WordPress, WooCommerce, Ecwid, Big Commerce, 3dcart, uye Hikashop.
Tags: 3dcartaffiliate marketingBig CommerceEcwidHikashopMagentoPrestashopshopifytapfiliatechii chakabatana kushambadzirawoocommerceWordPress
Nov 20, 2014 pa5: 21AM
Ini ndinobvuma kudiwa kweiyo yakabatana yekushambadzira system. Kutenda nechikamu.
Jun 26, 2015 pa5: 46AM
Mhoroi tafiriate izwiPress plugin?